Atlantisation: ny fandoroana haingana ny bao | Meteorolojia tambajotra
Atlantisation: ny fandoroana haingana ny bao
Portillo Alemanina | | Fiovan'ny toe-trandro
Araka ny fantatra dia miha-mafampana ny fiovaovan’ny toetr’andro ary ny hafainganana dia hamerina ny andrin-jiro ihany koa. Nisy vondrona mpikaroka iraisam-pirenena nanarina ny tantaran’ny fiakaran’ny ranomasina vao haingana teo amin’ny vavahadin’ny Oseana Arktika, any amin’ny faritra iray antsoina hoe Strait Fram, eo anelanelan’i Groenlandy sy Svalbard. Tamin'ny fampiasana sonia simika hita ao amin'ny zavamiaina bitika an-dranomasina, ireo mpikaroka dia nahita fa ny Ranomasimbe Arktika dia nanomboka nafanaina haingana tamin'ny fiandohan'ny taonjato farany rehefa nikoriana avy any Atlantika ny rano mafana sy masira kokoa, tranga iray antsoina hoe Atlantisation, ary io fiovana io angamba dia nialoha ny fiakaran'ny hafanana.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminareo ny momba ny fikarohana momba ny fandrendrehana ny bao izahay.
Nisy ekipa mpikaroka iraisam-pirenena nanarina ny tantaran'ny fiakaran'ny ranomasina vao haingana teo amin'ny fidirana amin'ny Oseana Arktika ao amin'ny andilan-dranomasin'i Fram eo anelanelan'i Greenland sy Svalbard. Nampiasa sonia simika hita tao amin'ny mikraoba an-dranomasina ny mpikaroka ary nahita fa nanomboka nafana haingana ny Oseana Arktika rehefa nikoriana avy tao amin'ny Ranomasimbe Atlantika ny ranomasimbe mafana sy masira kokoa tamin'ny fiandohan'ny taonjato farany. Ity tranga ity dia antsoina hoe Atlantisation. Tena zava-dehibe io fiovana io. Nanomboka tamin'ny 1900, Niakatra 2 degre eo ho eo ny hafanan’ny ranomasinaraha nihena ny ranomandry ary nitombo ny sira.
Ny valiny navoaka tao amin'ny gazety "Science Advances" dia manome ny fomba fijery ara-tantara voalohany momba ny Atlanticization ny Oseana Arktika ary manambara fa ny fifandraisana amin'ny Atlantika Avaratra dia matanjaka lavitra noho ny noheverina teo aloha.
Ity fifandraisana ity dia afaka mamolavola ny fiovan'ny toetr'andro Arktika, ary raha mbola mitsonika ny satroka ranomandry, dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fihenan'ny ranomandry sy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina maneran-tany izany. Noho ny fiovan'ny toetr'andro, Mafana ny ranomasimbe rehetra eran-tany, Fa ny Ranomasimbe Arktika no ranomasina kely indrindra sy marivo indrindra eran-tany, izay mafana indrindra.
Noho ny rafitra fanehoan-kevitra, ny tahan'ny fiakaran'ny maripanan'ny Arktika dia mihoatra ny avo roa heny noho ny salan'isa manerantany. Mifototra amin'ny fandrefesana amin'ny zanabolana, fantatray fa nihanafana tsy an-kijanona ny Oseana Arktika, indrindra tato anatin'ny 20 taona farany, saingy tianay ny hametraka ny fiakarana vao haingana amin'ny sehatra midadasika kokoa. Ny atlantisation dia iray amin'ireo antony mahatonga ny hafanan'ny Arktika, fa ny rakitsoratry ny fitaovana afaka manara-maso izany dingana izany, toy ny zanabolana, dia efa 40 taona monja. Rehefa mafana ny Oseana Arktika, dia hiempo ny ranomandry any amin'ny faritra afovoany, izay hisy fiantraikany amin'ny haavon'ny ranomasina maneran-tany.
Noho ny rafitra fanehoan-kevitra, ny tahan'ny hafanan'ny Arktika dia mihoatra ny avo roa heny noho ny salan'isa manerantany. Mifototra amin'ny fandrefesana amin'ny zanabolana, fantatsika fa rehefa mitsonika ny ranomasina, dia mampiharihary bebe kokoa ny fanambanin'ny ranomasina amin'ny masoandro, mamoaka hafanana ary mampitombo ny hafanan'ny rivotra. Raha mbola mafana ny Tendrontany Avaratra, hanalefaka ny permafrost, Mitahiry metana be dia be izy io, entona mampidi-doza kokoa noho ny gazy karbonika. Nampiasa angona ara-jeografika sy ara-tontolo iainana avy amin'ny antsanga an-dranomasina ny mpikaroka mba hananganana indray ny fiovan'ny toetran'ny antsanga an-dranomasina ao amin'ny tsanganana anaty rano nandritra ny 800 taona lasa.
Antenaina fa mbola manam-potoana hampitsaharana ny fiovan'ny toetr'andro isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Haitoetrandro » Fiovan'ny toe-trandro » Atlantisation: ny fandoroana haingana ny bao